मलाइ सबै भन्दा बढि यौन सुख दिने साथि लाइपत्र | Kamsastra
मलाइ सबै भन्दा बढि यौन सुख दिने साथि लाइपत्र
Sex, मलाइ सबै भन्दा बढि यौन सुख दिने साथि लाइपत्र,
तिमि संग को सम्बन्ध पनि ५ बर्ष भन्दा बढि को भैसकेछ। हाम्रो चिनजान भेटघाट त अझ धेरै बर्ष को हो। तर हामि बिच बडेको प्रगाडत,आत्मियता र हामिले एक अर्काबिच को पुरक बनेको चैं ५ बर्ष नाघेको हुनु पर्छ। हाम्रो आत्मियता एति धेरै गहिरो होला हामि एक् अर्का को लागि एति धेरै पुरक बनुंला मैले त्यो सोचेको भन्द धेरै माथि पुगेको छ। ऐले हामि एतै धेरै टाढा भएर पनि नजिक छौ। न मैले तिमिलाइ भुल्न सकेको छु म पनि एउट कुरा मा पक्का छु तिमिले पनि मलाइ भुल्न सक्दैनौ र भुलेकि छैनौ। मैले तिमि भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाइ फेरि पछाडि फर्कन मन लाग्यो। हो हाम्रो सम्बन्ध को सुरुवात हजुर तपाइ बाट सुरु भएको हू तर आज हामि एति धेरै खुलिसकेका छौ कि तिमि तं ले पनि हाम्रो माया झन बदेको अनुभव हुन्छ। हो मान्छे भन्छन् यौन केवल बासना हो तर म भन्छु यौन बासन य भोक मात्रै हैन दुइ बिपरिता लिंगि लाइ एक आर्कामा जोड्ने एउटा आधार स्तम्भ हो। सायद तिम्रो मेरो सम्बन्ध केवल भोक ले मात्रै बनाएको हुदो हो त आज मलाइ तिमि र तिमिलाइ मेरो सम्झना पनि आउनु नपर्ने हो। हाम्रो त्यो सम्बन्ध जवानि को प्यास मात्रै मेटाउन मात्रै हुदो हो त म आझै किन तिमिलाइ सम्झिरहन्छु।किन तिमि सङ बिताएका हरेक पल मेरा लागि अविस्मरणिय छन्। मलाइ थाहा थियो तिमि अर्का कि नासो हौ म राम्रो संग जान्दथे हाम्रो बिच मा प्रेम हुन सक्छ तर हामि जीवन मा कहिले सामाजिका रुपमा संगै हुन सक्दैनौ। हामिले त्यो सत्य लाइ नबुझेका पनि हैनौ। मलाइ थाहा थिएन हामिले हाम्रो सम्बन्ध लाइ के नाता दिने। तर म अहिले प्रस्ट छु हामि सामाजिक रुपले अस्विकार्या सम्बन्ध होला तर हामि प्रेमि हौं। म हाम्रू सम्बन्ध लाइ शारिरिक भोक ले जन्माएको सम्बन्ध मात्रै मा सिमित राख्न चाहन्न। हो तिमि मा पनि पक्कै बासना को भोक थियो म पनि एक्लो थिये जवान थिये हाम्रो सामिप्य सायद तेहि शरिरक भोक ले बढाएको हो। तर के हाम्रो त्यो सम्बन्ध एक अर्काले यो शरिर पाउद मात्रै हो त? के आज हामि शारिरिक रुप ले टाढा हुने बितिकै सकियो त? के तिमिलाइ मेरो सम्झना कैले औदैन र?
सायद तिमिलाइ लाग्दो हो सामाजिक रुपले लुकाउनु पर्ने हाम्रो सम्बन्ध लाइ किन जोडि राख्ने? हामिले एक अर्का लाइ सम्झने कोसिस किन गर्ने? कुनै दीन हाम्रो यो सम्बन्ध केहि गरि कसैलाइ थाहा भयो भने? हो म पनि यो सबै कुर सोछु। आज म पनि एक्लो छैन। बिर्सिन मलाइ झन् बडि सजिलो होला। तर म बिर्सिन सक्दिन र चाहन्न। हाम्रो सम्भन्ध एक दिन मा बनेको हैन। सायद तिम्रो श्रीमान सङ को सम्बन्ध बन्न तेति बर्श लगेन होल। तिम्रो श्रीमान सङ तिमिलै नजिक् हुन तेति समय लगेन होल।एस्को अर्थ तिमि तिम्रो श्रीमान लाइ माया गर्दिनौ भन्ने पनि हैन। हो तिम्रो श्रीमानलाइ अगाध माया गर्छौ।असिमित माया ,बिस्वास र आदर छ तिमिलाइ तिम्रो पति माथि। सायद त्यो नहुदो हो त। बर्षौ देखि टाढा रहेर पनि तिम्रो पति प्रति को श्रधा किन्चित पनि कम भएको छैन। तिमि र तिम्रो पति बिच् को प्रेम अतुलनिय छ अनि तेस्को फुल झन रहर लाग्दो। कति राम्रो छ तिम्रो छोरा। रुप ले रङ ले अनि म बिस्वस्थ छु तिम्रो अभिभावकत्व ले उस्को स्वभाव पनि तेतिकै राम्रो हुनेछ।
मैले तिम्रो परिवार प्रति कैले पुर्वाग्रह राखिन तिम्रो श्रीमान कति सरल छन् म त्यो पनि जान्दछु। असल छन् त्यो पनि जान्दछु।तिम्रो श्रीमानप्रति मेरो सधै आदर हुनेछ। तिमि दुइ बिच चाढै मिलाप होस्। तिम्रो परिवार अब धेरै अपुरो नहोस् अब तिम्रो छोरा ले पनि बाउ को माया सङै बसेर पाओस् मेरो शुभकामना।
आज फेरि मलाइ तिम्रो सम्झना आयो।”तिम्रो मेरो सम्बन्ध को अर्थ खोज्न मन लाग्यो।आफै संग प्रश्न सोध्न मन लाग्यो।” हाम्रो सम्बन्ध यो सन्सार ले बनाएको नाता भन्दा पनि बाहिर को नाता रहेछ माथि को नाता रहेच।अरुको भावना ले सम्बन्ध बनाउछ अनि शरिर मा गएर टुंगिन्छ। हाम्रो सम्बन्ध भावना ले बनायो त्यो सम्बन्ध अर्कै थियो जब शरिर संग त्यो जोडियो हामि अर्कै सम्बन्ध मा पुगेउ जब टाढा भयेउ त्यो झन् बडि गाडा भयोशरिर टाढा भएपछि हामी फेरि भावनाले नजिकिएका छौं।।मलाइ तिमि सम्झना आएको यो पहिलो पटक हैन बरु निरन्तर सम्झना आएको हो। मैले तिमिलाइ पहिलो नजर मा मन पराको हैन , बर्षौं को संगत ले मन पराको हूं। तिम्रो शरिर त पहिले झन् भर्भराउदो थियो तर तिम्रो ब्यवहार ले म बडि आकर्शित हुन पुगेको हुं। येसो भन्दै मा म तिम्रो शरिर प्रति कहिले आकर्शित भइन भने भने त्यो अन्याय हुनेछ। तिम्रो रूप प्रति मैले कहिले ध्यन दिन भने भने त्यो कोरा झूट हुनेछ। तिमिमा त्यो यौन मादकता पहिले देखि नै थियो।तिम्रा शरिर पहिले देखिनै आकर्षक थिए। तिम्रा नितम्बहरु अफैमा अकर्शण का केन्द्र थिये। गाजल लगाउदा तिम्रा आंखा हरु पागल बनाउने पैले देखि थिये। मेरो अगाडि होचो कद देखिन्थ्यो होला तर मलाइ मेरो अफ्नै कद तिम्रो लागि नसुहाउदो लग्थ्यो।मलाइ तिमि सुहाउंदो आफ्नो कद भैदेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर हाम्रो सम्बन्ध मा त्यो कद कैले समस्या बनेन।
मैले तारिफ गर्नै पर्छ तिम्रा ति आंख हरुको। म अझै सम्झन्छु जुन् दिन तिमि रातो लुगा मा हुन्थेउ अनि थोरै सृङार, त्यस माथि त्यो कालो गाजल। कस्ले भन्न सक्छ तिमि रामृ गनिदैनौ भनेर। कुन मर्द पुरुष होला जो तिम्रो त्यो रुप देखेर मोहित नहोस्। तिम्रो त्यो सौन्दर्य देखेर पनि कुनै मर्द को मन बिचलित भएन, उस्का शरिर का अंग हरु उत्साहित भएनन्,उस्मा यौन चाहना जागेन उस्का ग्रन्थि हरु हिंस्रक बन्न तातिएनन् भने त्यो पुरुश नपुंसक हुनु पर्छ।एस अर्थमा म नपुंसक होइ न। मैले तिमिलाइ देखेको दिन म ततिएको थिए म रातिएको थियें। मेरो शरिर ले तिमि मागेको थियो। मेरो शरिरमा अनायासै तिब्र रक्त संचार भएका थियो। नढांटी भन्दा तिम्रा ति उचालिएका स्तन हरु मेरो जवानिको घिउ मा आगो हाल्ने काम् गरेका थिए। तिमिले जागिर छोडेपचि जब मैले तिमिलाइ नित्य जस्तो देख्न थाले अनि भेट्न थाले मैले नढाटि भन्नु पर्छ मैले तिमिलाइ सम्झेर तिम्रो शरिर लाइ सम्झेर तिम्रा ति स्तन लाइ सम्झेर धेरै पटक आफुलाइ स्खलित गरेको छु। कैयौं हप्ता मेरो दैनिकि बनेको थियो त्यो। तर म खुसि छु तिमिले मेरो त्यो चहाना लाइ आफ्नो पनि बनयौ। मेरो जवानि लाइ आफ्नो मादकता मा डुबाएउ र मलाइ थाहा छ तिमि आफै पनि दुबे उ। तिम्रा शरिरका ति कामुक सुगन्ध हरु अझै मेरो मस्तिश्क बाटा टढिएको छैन। खै कता गए हाम्रो शरिरिक सम्बन्धका बेला घिन र लज्जा भन्ने ति शब्द हरु। तिम्रा शरिर का हरेक गंध हरुले मलाइ उतेजित बनौथ्यो। मेरा पुरुश भनेर चिनाउने ति अंग हरुलाइ कति प्रेम ले तिमि अफ्नो ठनेर माया गर्थेउ। सुरु त मैले नै गरेको थिये तिम्रा उत्तेजित गराउने ति अङ हरुलाइ कुनै घिन लाज नमानि माया गरेर। त्यो हाम्रो दोस्रो शरिरिक सम्बन्ध को दिन थियो मैले तिम्र ति अङ हरुलाइ चुमेको। तेसै दिन मेरा जिब्रा हरुले तिम्रा ति कोमल यौनांग हरु स्पर्श गरेको।मलाइ घिन लागेन। मलाइ त तिमि खुसि भएको हेर्नु थियो।मैले त्यो गर्न मन परएं।तिमिले भनेको पनि हैनौ म आफै उत्साहित भयेको हुं। तिम्रा ति कोमल यौनंग हरुले अझै मलाइ उत्तेजित बनाउछ। अझै तिमिलाइ सम्झदा म आफु लाइ स्खलित गराउंछु भन्दा मलाइ गर्ब लग्छ। तिम्रा थोरै तर आकर्षक यौनंग ओरिपरि का ति रौं हरु आहा कति राम्रा देखिन्छन्। लाग्छ बगैचा मा मालि ले सारै मेहनत गरेर बनाएको फुलबारि होस्स्। ति फुलबारि को बिचमा निस्किएका ति छाला हरु ले बगैचा को बिचमा फोहोरा को काम गरेको छ। जब जब म संग नजिकिन्थेउ आलिंगन मा आउंथेउ मेरा अंग हरु को स्पर्श हुन्थ्यो। तिम्रा ति फोहोरा हरु अफै पानी फ्याक्न थाल्थे, लाग्थ्यो त्यो ब्रह्मा निर्मित स्वचलित फोहोर हो।
तिम्रा स्तन आहा कति राम्रा थिए उचालिएका। तिम्रो त्यो स्तन छुने,छाम्ने,समत्ने, निमोठ्ने अनि चुस्ने के गरिन मैले।तर तिमि कति धिर भयेर सहन्थेउ। कति संयमित हुन्थेउ तिमि। कस्तो हुन्थ्यो होला तिमिलाइ तर कैले अधैर्य भैनौ तिमि। सधै आफ्नो आलिंगन मा मलाइ हालेर आफ्नो चाहना लाइ बिर्सेर भएपनि मलाइ यौन सुख दिन लालायित हुन्थेउ। मलाइ अझै सम्झना छ तिमिलाइ चाहना नभएको दिन पनि तिमि मलाइ निरास बन्न दिदिनथिएउ। मेरा लिंग हरुलाइ चलाउन्थेउ। माया गर्थेउ,चुम्थेउ र बडो प्रेम ले आफ्नो मुखमा राखेर चुस्थेउ। म स्खलित नहुन्जेल तेस्लै निरन्तर चुमिरहन्थेउ,चुसि रहन्थेउ। कति गाहारो भयो होला तर भेटेपछि कैले मलाइ मन छैन भनिनौ।मलाइ सधै शरिरिक रुपले प्रशन्न बनौथेउ। आफै भन्थेउ आफुलाइ सम्पर्क गर्न मन नलागेको दिन को लागि यो राम्रो उपाय हो। म पनि तिमिले मेरो लिंग लाइ एक्पटक दाया बाता अर्को पटक बाया बत जिब्रो ले चलाउने बितिकै उत्तेजित हुन्थे।मेरो लिंग मा नया उर्जा आउंथ्यो। हान्ने गोरु जस्तो हुन्थ्यो मेरो लिंग तिमि सजिलै आफ्नो बसमा पार्थेउ। कति सक्ति छ त्यो मुखमा।मेरा ति लिंग लाइ क्षण भर मै सिथिल बनाउन सक्ने। म सोच्दै गये तिम्रो त्यो मुखबाट मिठो र मधुर स्वर निस्किन्छ।मैले कैले तिम्रो मुख बाट नमिठो सुनिन। त्यो मुख बोल्न सक्ने,खान सक्ने त्यो जिब्रो स्वाद् लिन सक्ने अनि तेहि मुख ले पुरुश लाइ यौन को स्वर्गिय अस्नन्द दिन सक्ने।
तिमि सधै मेरो यौन सहयोगि भएउ।कैले तिमिले यो गर्दिन भनेनौ।मलाइ अझै सम्झना छ हाम्रो त्यो सायद् अहिले सम्म को(?भोलि को के थाहा) अन्तिम संभोग हुनु पर्छ।तेस्मा तिमिले आफुलाइ खाटमा कसरि आसन बनाएउ। हाम्रो त्यो पहिलो कुकुरको जस्तो आसन हुनुपर्छ। तिमि सहजै तयार भएउ। आज म सत्य खोल्दै छु तिमि संग छुट्टिने त्यो दिन मैले ४ पटक हस्त मैथुन गरेको थिए।मेरा बिर्य हरु सकिएका जस्ता थिए तर तिमिलाइ देख्ने बितिकै म उत्तेजित हुन पुगे।तिमि पनि उत्तेजित भएउ होला।सायद तिमिलाइ पनि लग्यो होला अब हम्रो संभोग को दिन कहिले जुर्ने हो।हामिले धेरै बेर संभोग गरेउ तर हामि स्खलित भएनौ।अन्तिम मा तिमिले आफ्नो यौनांग पोल्न थालेको कुरा गरेपछि हामि ले त्यो रोकेका थिएउ।
आज अनायासै हामि कसरि दुइ ब्यक्ति एक हुन पुगेउ सम्झिये। खासमा मेरो मन मा पनि तिमि पाउने चाहना थियो तिम्रो मनमा म पाउने। म अझै सम्झन्छु त्यो ताका गुरुकुल भन्ने टिभि मा रियालिटि सो आउंथ्यो। तेस्मा काजि भन्ने ले जितेको थियो। सेमि फाइनल तिर पुगेपछि हामि त्यो कार्यक्रम को बारेमा गफ गर्थेउ अनि कैले काहिं संगै हेर्थेउ। एकदिन तिमि तेहि कार्य क्रम हेर्न आएउ। टिमि रातो ट्राउजर मा थिएउ।माथि तिमिले कृम कलर को फुल बाहुले लुगा लगाकि थिएउ। भित्र ब्रा र प्यान्टि हुनुपर्छ।त्यो बेला सम्म मैले भितृ लुगा हेर्ने सौभाग्य पाको थिन।म पक्का छु त्यो बेला सम्म तिम्रो मन मा पनि ननिभ्ने आगो लागिसकेको थियो। तिमि आएउ। म टि भि हेर्दै थिये। मैले तिमिलाइ बस्न आग्रह गरे तिमि एक्छिन अडिएउ। अनि मैले फेरि बस्न भने तिमि खाट को एउटा कुन मा बसेउ। चिसो चिसो थियो मैले तिमिलाइ सिरक तान्न आग्रह गरे। तिमिले सिरक को एउटा फेर तानेउ। अब तिमि सिरकको एउटा कुना मा थिएउ म अर्को कुना मा। बिस्तारै हामि सिरक भित्र नजिकिदै थिएम। छोरा कम्पुटर खेल्न आर्को कोठामा गयो।अब हामि २ मात्रै सिरक मा थिएम्।बिस्तरै हामि झन् झन् नजिकिदै थिएम्।मेरा खुट्टा तिम्रा खुट्टा सङ मेरा तिघ्रा तिम्रा तिघ्रा संग् टासिदै थिए। म पनि तातिदै थिए तिमि पनि तातिदै थिएउ। हामि अब पुरै सरिर टासिएका थिएउ। अचानक घरको घन्टि बज्यो मैले ढोका खोले मेरो साथि आको थियो उ धेरै बेर बस्यो त्यो दिन टासिएर बस्ने बाहेक हाम्रो प्रगति हुन सकेन। साथि आएपछि त हामि टासिएर पनि बसेनौ।दोस्रो दिन मैले फोन गरे तिमि सुतिसकेको थिएउ। तिमिले तेसै भनेउ। तेस्रो दिन म तिम्रो मा गये। तिमि टिभि हेर्दै थिएउ।म एकछिन तिम्रो खाट को एउटा कुनामा बसे। तिमिले पनि मलाइ खाट मा बस्न आग्रह गरेउ मैले पनि थिकै छ भने २-३ पटक को आग्रह मा मैले तिमि संगै सिरक मा बस्ने भने। तिमिले केइ भनिनौ तर आफ्नो घुंडा लाइ हातले समातेर बसेउ। मैले के भयो भनेर सोधे तिमिले सन्चो छैन भनेउ। हामि धेरै बेर तेसरि बसेउ। पछि म सुत्न गये।त्यो आइतबारको दिन थियो।भोलि पल्ट म काम मा गए। फर्केर आउद थाहा भयो तिमिलाइ हन्हनि झरो आएको थियो। पछि थाहा भयो त्यो त तिब्र यौन इच्छाले ल्याएको जरो रहेछ। तिम्रो पुतिले त्यो अघिनै लांडो मगिसकेको रैछ तिमिले दबाउदा जरो आएको रहेछ।मैले एक गिलास दुध तताएर दिए। तेस्पछि म तिमिलाइ सोध्थे कस्तो छ। तेति हो। दिन बित्दै थियो,तिमि लाइ जरो आएपछि का दिन मा मलाइ तिमि सङ जरो आउनुभदा अगादि को दिन मा सङै बसेको मन परेन कि जस्तो लाग्यो। म तिमि कहा जान छोडे। तिम्रो जरो निको भयो। न तिमि आएउ न म गए। फेरि मेरो काम पनि थियो।
शनिबार थियो त्यो दिन मलाइ अझै सम्झना छ तिमि फलफुल लियेर काट्दै थिएउ। मैले देखे तिमि आफ्नो हाथमा चक्कु ले थिच्दै थिएउ। सायद तिमिमा यौन चाहना एति धेरै बडि सकेको थियो कि तिमिलाइ त्यो रोक्न गाहारो हुदै थियो। मैले एक्छिन् हेरे तर केइ भनिन। राति तिमि छोरो लिएर आएउ।उस्ले कम्पुटर चलाउने भन्यो।मलाइ थाहा छ तिमिले छोरो लाइ कम्पुटर खेल्न हिड् भनेर ल्याएको थिएउ त्यो दिन। मैले अर्को कोठामा कम्पुटर खोलेर छोडिदिए। आज मलाइ अलि धेरै साहस अएको थियो। हप्ता दिन अगाडि संगै टासिएर बसेको,म तिम्रो मा गएर बसेको तिम्रो फलफुल काट्दा को क्षण। मैले आज आंट गर्नु पर्ने नै थियो। तर धेरै बेर लगाएर म तिमि सङ आज फेरि टांसिए। तिमि कलो कुर्त मा थिएउ त्यो दिन।सायद कपाल मा तेल पनि हालेको थियो। हामि धेरै टासिएका थिएम। मैले बिस्तारै तिम्रो कुम को पछाडि हाथ राखे तिमि केइ बोलिनौ। मैले बिस्तारै आफ्नो हाथ् तिम्रो कुममा राखे तिमि बोलिनौ। मैले अलि बडि साहस गरेर तिम्रो कान चलौन थालें। तिमिले केइ बोलिनौ। त्यो बेला सम्म तिमि र म दुबै तातिसकेका थिएम्। मैले तिमिलाइ सोधे “हामिले हाम्रो सिमा त नाघेका छैनौ है’ तिम्रो जवफ थियो, छ होला नि छैन र? तिमिले हासेर जवाफ दिएउ। म अब ढुक्क भयें ।तिमि पनि तयार छौ ,यौनले पागल बनाएको त्यो क्षणमा तिम्रो र मेरो शरिर लाइ एक् बनौन। तेति कै मा छोरा आयो उ तिम्रो काखमा बस्यो। म सहनै नसक्ने गरि उत्तेजित भैसकेओ थिए। मैले तिम्रो दुध समात्न हात भित्र पसाएं। एक्छिन तिम्रो सेतो ब्रा ले अफ्त्यरो पर्यो मैले तेस्लाइ हतए मैले तिम्रो दुध पैलो पटक समाते। आहा कस्तो स्वर्गिय आनन्द थियो त्यो। मैले केवल २ पटक चलाए होला त्यो बेला। फुच्चे ले फर्केर सोद्यो के गरेको। म हासे। तिमिले तेसपछि जान्छु भनेउ मैले एक छिन बस्न भने तिमि बसेउ तेसपछि तिमि गएउ। मैले राति तिमिलै फोन गरे तिमिले एकदम निन्द्रा लागेको जवाफ दिएउ। त्यो रात मैले फेरि आफ्नो लिङ लाइ सिथिल बनौन आफैले लिङ तल माथि गर्नु पर्यो। एकचोटि ले त्यो मान्ने वाला थिएन। सायद तिन पटक को हस्त मैथुन पचि म थाके मेरो लिङ थाकेको थिएन म निदाए।
भोलिपल्ट आइतबार थियो म धेरै बेर सुते। दिनभर त बित्यो। रातपरेपछि हेरे तिम्रो घर को कोठाको बत्ति बलेको थिएन। १० बजे सम्म पनि बत्ति नबलेको देखेपछि म निरास जस्तै भए।र सुत्न गएं। अन्तिम कोसिस स्वरुप हेर्न गएं। धन्य तिम्रो बत्ति बलेको देखें। मैले फोन उठाएं। तिमिले आज रक्सि खाको छु भनेउ।थाहा छैन खाएको थिएउ कि थिएन।मैले मेरो मा आउन भने तिमि ले किन भनेउ मैले भेट्न मन छा भने तिमिले रक्सि लागेको भनेउ।मैले म आउन्छु भने तिमिले फेरि किन भेट्नु पर्यो भनेउ। मैले धेरै आग्रह गरे तिमि न आउने भनेउ।मैले म आउन्छु भन्दा किन भन्थेउ। मैले भेट्न मन छ भन्थे।म किन आउन चाहेको तिमिलाइ न थाहा भएको होइन। तिमि जिस्किदै थिएउ। मैले अन्तमा ढोका खुलै राख म आएं अरु कुरा थाहा छैन भनेर फोन राखें। म तिम्रोमा गये ढोका खुल्लै थियो। म ढुक्क भए तिमिमा पनि यौन को भोक तेतिकै छ जति म मा छ। तिम्रो शरिर ले पुरुश शरिर चाहेको छ भन्ने मा म ढुक्क भएं। तिमिमा यौन चाहना जागेको छ मैले थाहा पाएं। तिमि यौन को भोको छौ मैले बुझें। हुनपनि बर्षौं को प्रतिक्ष्या थियो त्यो। हामि दुइ शरिर एक हुन लागेको त्यो समय एकैछिन मा आएको थिएन। बर्शौं को चाहना र प्रतिक्ष्य को प्रतिफल थियो त्यो। अन्धकार थियो कोठा तर ढोका मा चुकुल लागेको थिएन।मैले ढोका लगाएं।म बिस्तारै तिम्रो बेड नजिकै पुगें।तिमि सुतिरहेकि थिएउ। अनि दौडेर तिमि माथि बर्षौ देखि भोको सिंहले आहार पाउदा झम्टे जस्तै तिमि माथि झम्टें। तिमि पातलो नाइटा सुटमा थिएउ। त्यो लुगा बाहिर बाट नै तिम्रो शरिरको तातो अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। मेरो हात अन्जानै मा तिम्रो मिलेको गोरो ,गोलो उठेको स्तनमा पुग्यो।मैले बाहिर बाट तेस्लै माया गरे।सुम्सुमाए। अनि बिस्तारै मैले मेरो मुख तिम्रो मुखमा लगें।मैले गालामा माया गरें निधारमा गरें। ओठमा गरें। मैले तिम्रो ओठ भित्र माया गर्न खोजें।तिमिले दिनौ।तिमि मलाइ तड्पाउन चाहन्थेउ। यौन सुख नै तेस्मा छ।जब बिपरित लिङि केहि छिन को मेहनत पछि मात्रै राजि हुन्छ। मैले मेरो प्रयत्न जारि राखें।अन्तत: त्यो क्षण आयो म तिम्रो मुख खोल्न सफल भएं।आहा त्यो अनुभव बास्तवमै स्वर्गिय आनद दिने थियो।मेरा दुबै हाथहरु तिम्रा दुइ गोलाकार मिलेका दुध हरुमा थिए।यसै बिचमा मैले तिम्रो ब्रा खोलि सकेको थिएं।मेरो ओठ तिम्रो ओठमा अनि मेरो जिब्रो ले तिम्रो त्यो सुकोमल जिब्रो लाइ चलाउदै थियो तिम्रो जिब्रो लजालु केटिले झैं लुक्न खोज्दै थियो मेरो जिब्रो ले लखेड्डै थियो। एकछिन पछि को त्यो लुकामारि पछि मेरा लिंग हरु फलाम जस्तै कडा र हान्ने गोरु जस्तै आक्रामक भैसकेका थिए।हामि चल्दै थिएम। हामि यौन सुख पाउदै थिएम। तिम्रो नाइट सुट सरेर तिम्रो त्यो गोरो राम्रो मिलेको चाक सम्म पुगिसकेको थियो।मेरो हात अनायासै तिम्रो त्यो चाक मा पुगिसकेको थियो। मैले एकछिन तिम्रो चाक लाइ चलायें। अब मेरो हाथ बिस्तारै तिम्रो चाक बाट सर्दै अगाडि आउदै थियो। मेरो हाथ तिम्रो त्यो सृस्टि गर्ने सानो तर जस्तो सुकै शक्तिशालि पुरुशलाइ पनि कमजोर र सिथिल पार्न सक्ने असिमित क्षमता भएको त्यो ठांउ जस्को लागि मैले बर्षौं कुर्नु परेको थियो त्यहा जाने प्रयत्न का साथ तिम्रो तिघ्रा सम्म आइपुग्यो। मैले तिम्रो दुइ तिघ्रा फट्टौने कोसिस गरें। फेरि तिमिले मलाइ तड्पाउने कोसिस गरेउ। तिमिले आफ्नो तिघ्रा जोडिनै राखेउ। मैले हातले धेरै बेर सम्म छुट्टौने कोसिस गरे। तिमि आफ्नो शरिरको सारा बल लगाएर रोक्दै थिएउ। मलाइ तड्पाएर तिमि मजा लिदै थिएउ।खस्मा म आफुलाइ रोक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएं।तिमि मलाइ यातना दिएर मजा लिदै थिएउ। मैले बल्ल बल्ल तिम्रो त्यो दुइ तिघ्रा लाइ दुइतिर बनाउन सफल भएं। भोलिपल्ट तिमि भन्थेउ तिम्रा तिघ्रा हरुमा मेरो हाथ का दाग हरु अझै छन्। कस्तो बल गरेको हिजो राति।अझै राता छन् मेरा तिघ्रा हरु अनि देखाउंथेउं। अन्तत: मैले तिम्रो शरिर को सबै भन्दा महत्वपुर्ण अंग जस्को मलाइ बर्षौं देखि इन्तजार थियो जस्को लागि म बर्षौं तड्पिएको थिएं मैले पाएं। मैले आफ्ना हाथ हरु त्यहा पुर्याएं। तिम्रो भितृ कट्टु पुरै बिझेको थियो मैले त्यो खोलिदिएं र तिम्रो पुति लाइ स्वत्रन्त बनाएं। मैले ढिला नगरिकन तिम्रो दुइ तिघ्रा को बिचमा आफ्ना खुट्टा हरु राखें। मैले आफ्नो हाथ तिम्रो पुतिमा मा राखें।त्यो पुरै भिजेको थियो। कोठा अन्धकार थियो।मैले छामेर सबै आनन्द लिनु पर्ने थियो। तिम्रो त्यो भित्र बाट आएको रसले तिम्रो पुति वरिपरिका रौं हरु पुरै भिजाएको थियो। मैले तिम्रो त्यो भिजेका रौं हरु एक्छिन चलाएं।तिमि यौन को भोकले पुरै अस्तब्यस्त भैसकेको थिएउ। म तेस्तै थिएं।मैले तिमिलाइ कण्डम छ भनेर सोधें तिमि बोलिनौ। मैले आफ्नो खल्ति बाट कण्डम निकले र लगाए।मेरो लिंग अब तिम्रो प्वालमा पस्न हतारिएको थियो।अब कुर्ने अवस्था मा थिएन। जब जब मैले मेरो लिंग लै आफ्नै हाथले चलाएर झार्ने गर्थे अनि झर्नु भन्दा केहि बेर अगाडि पनि म एस्तै अवस्थामा हुन्थे।मेरो लिंग अब लिंग नरहेर लांडो भैसकेको थियो। मैले मेरो लांडो तिम्रो पुतिंमा छिरौन खोजें हतार मा मैले तिम्रो प्वाल भेटिरहेको थिन। धन्य मैले तिम्रो पुति भेटें र मैले प्वाल मा छिराएं।आहा सारा संसार भुल्ने आनन्द थियो त्यो।सयद कसैले त्यो बेला काटेको भयेपनि मलाइ दुख्ने थिएन। मैले केवल दुइपटक तिम्रो पुतिमा मेरो लांडो हालेर तल माथि गरे होला मेरो लाडो बाट त्यो सेतो बिर्य निस्किन थालिहल्यो।कस्तो बेइमानि त्यो। खासमा म धेरै उत्तेजित भैसकेको थिएं। तेसैले मेरो बिर्य झरिहल्यो। तर मैले हिम्मत हारिन मैले तिम्रो बुबु चलाइरहें।तिमिलाइ माया गरिरहें निरन्तर। सयद राति को दुइ बजेको थियो होला म फर्कें।
भोलिपल्ट सोमबार थियो काम मा जानु पर्ने।मैले अफिसमा आउंदिन भनेर खबर गरिसकेको थिएं।मलाइ रातभरि निन्द्रा लागेको थिएन। म त झन् भोकाएको बाघले केवल एकगास आहार पाएपछि बौलाएझैं भएको थिएं। ९ बजे मैले तिमिलाइ फोन गरें अनि आउन आग्रह गरें तिमिले राति पनि सुतेको छैन निन्द्रा लागेको छ आउदिन भनेउ। मैले धेरै अग्रह गरेपछि बुढाको फोन आउंछ भनेउ।मैले फोन लिएर आउ , मैले अफिस बिदा लिसकेको छु तिमि आउंछौ भनेर भने। तिमि आउन तयार भएउ। तिमिलाइ पनि मलाइ जस्तै प्यास बडेको थियो। राति त हामिले ले केवल तिम्रो र मेरो लिंगलाइ जोडाएका थिएम्। माया मात्रै गराएका थिएम्। ९:३० बजे बिहन तिमि मेरो मा आइपुगेउ।तिमि त्यो दिन रातो सल्वार कुर्ता मा थिएउ।सदा झै उज्यालि,राम्री तर अलिक निंद्रा नपुगेकि जस्ति यौन कि भोकि जस्ति। मैले कोठाको ढोका लगाएं तिमिलाइ आलिंगन मा लिएं,मोइ खाएं बोकें र बिस्तरामा सुताएं। म एकादम आक्रमक शैलिमा तिमिलाइ माया गर्न थाले।आज तिमि पैले भन्दा खुलेकि थिएउ। मलाइ सजिलै सुरुवाल खोल्न दिएकि थिएउ।मैले तिम्रो कट्टु सजिलै फुकालें। अब तिमि तल नांगो थिएउ।मैले कुर्ता खोल्न खोजें तिमिले सार्न मत्रै दिएउ।मैले कुर्ता लाइ बुबु भन्दा माथि सम्म सारेंपुरै खोल्न मनिनौ।मैले मेरो हात लाइ तिम्रो पछाडि लगे ब्रा को पिन खोले। तिमिले सजिलै दुइ हात तिर बाट ब्रा निकालेर फ्याकेउ। मैले निकल्न सघाएं।सायद मेरो लांडो को आवस्यकता त तिमिलाइ थियो तर पुरै नंगो हुन तिमिलाइ अफ्ट्यारो लागिरहेको थियो। मैले तिम्रो बुबुको मुण्टो समाते र मेरो जिब्रो ले चलाउन लागें।हातले तिम्रो बुबु पनि माड्डैथिएं। बिस्तरै तिम्रो पुति चलाएं त्यो पहिले नै भिजिसकेको थियो। मैले कण्डम लगाएं र तिमिमाथि धावा बोलें। एस्पालि म चांडो जरिन।मैले तिमिलाइ पनि आनन्द दिने कोसिस गरेरै चिकिरहेको थिएं। हाम्रो चिकाचिकि एक्छिन चल्यो। म भन्न सक्छु तिमिले पनि मजा लि रहेकि थिएउ। सायद अहिले भएको भए झन बडि मजा दिन सक्थे।तेस्मा मलाइ पुरा बिश्वास् छ। अहिले भएको भए म तिम्रो पनि नझरे सम्म आफ्नो झर्दिन थिएं होला।र तिम्रो कसरि झार्ने पनि मलाइ अहिले राम्रो सङ थाहा छ। केहि छिनको चिकचिकि पछि मेरो झर्यो तिमि पनि थाकेउ। म तिमि माथि सुते ।
एकछिन पछि हामि निदाएछौ। एकछिन पछि म निंद्रा बाट बिउझिएं ।हामि चिक्दा चिक्दै निदाएको भए पनि हाम्रो मन भरेको थिएन। म पनि नांगै थिएं तिमि पनि नांगै थिएउ।माथि बुबु छोपेको थियो। म बिउझिदा मेरो लांडो ठन्किरहेको रैछ। म जुरुक्क उठें तिमि निदाएकै थिएउ,मैले सहनै सकिन मैले मेरो लांडो तिम्रो पुतिमा फेरि छिराएं।फेरि सुरु भयो हाम्रो चिकाचिकि। मैले तिम्रो बुबु माडे,तिम्रो बुबुको मुन्टो लाइ चाटें,चुसें।तिमि फेरि तातिएउ,म त पैले तातिएकै थिएं। मैले मेरो लांडो लाइ बिस्तारै तिम्रो पुतिमा छिराएं।तिमि यौन सुख पाउदाको आवाज निकाल्दै थिएउ।मैले पुतिमा लांडोको गतिलाइ बढएं।जति चांडो मेरो लांडो लै तिम्रो भिजेको पुतिमा राखेर उफ्रन्थे तेति चांडो चांडो प्याच् प्याच् को आवाज आउंथ्यो। त्यो आवाजले मलाइ झन् बडि उत्तेजित बनाउंथ्यो। तिमि पनि झन् बडि चहना रख्दै मलै चिटो गर्ने इशारा गर्थेउ। हाम्रो लांडो पुतिको मिलन बास्तव मै सबै कुरा बिर्साउने थियो।हामिले त्यो बेला सबै बिर्सिएका थिएम। आफ्नो घर परिवार।समाज सबै। धेरै बेर उफृएपछि हमि थाकेउ।अनि फेरि निदायेउं।
मेरो लांडो फेरि ठन्कियो त्यो बेला म एति तातिएर उठेको थिएं कि मैले कण्डम लाउने समय पनि पाइन अथवा लाउन मन गरिन तिमिले पनि भनेनौ।सायद तिमिलाइ कण्डम बिनाको सम्भोगको चाहना थियो।मैले तिमिलाइ कण्डम नलगाएर चिकेको त्यो पहिलो थियो।बिस्तारै मैले मेरो लांडो तिम्रो पुतिमा हालें। अनि सधै झै तिम्रो बुबु को मुन्टो चुसें। हाथले दुधको पोका समातेर माड्न थालें। तिमिलाइ माया गर्दै मैले छिरएको मेरो लांदोलाइ तिम्रो पुतिले प्रेमसंग फेरि पनि स्वागत गर्यो। मैले फेरि मेरो लांडोलाइ माथि तल गरे। पहिलो भन्दा धेरै बेर यो चिकाचिकि चल्यो। अनि मेरो झर्यो।मैले हत्त न पत्त अफ्नो लांडो बहिर निकाले र झारें। यो हाम्रो तेस्रो सम्भोग थियो। तेस्पछि हामि निदाएनौ। तर पल्टि रखेउ। मैले तिम्रो पुति आफ्नो हाथले चलाइरखे। तिमि मेरो छातिमा ताउको राखेर पल्टिराखेउ।मैले बिस्तारै तिम्रो रौं चलाएं। एक्छिन ति रौं हरु खेलएं। तिम्रो प्वाल बाट रस निस्किन थालिसकेको थियो। मैले मेरो औंला लाइ तिम्रो प्वालमा हालेर चलाउन थालें तिमिलाइ रमाइलो लगिरहेको थियो।मलै तिमिलाइ अझै बडि यौनसुखमा मा डुबाउन मन लाग्यो मैले तिम्रो बुबु चुमे,पेट चुमे तिम्रो पुतिका रौं हरु चुमे अनि अन्तमा मैले तिम्रो पुतिलाइ चाट्न थाले। आहा कस्तो रमाइलो त्यो क्षण। म जति जति तिम्रो पुति चट्ठे तिमि तेति धेरै सुस्केरा हाल्थेउ।तिम्रो मुख् बाट आएको आवाज ले मलाइ तिम्रो प्वाल चट्न झन् बडि प्रेरित गर्थ्यो। मैले मेरो लांडो लाइ फेरि तिम्रो पुतिमा छिराए। तिमि मेरो लिंग लाइ आफ्नो पुति मा पाएर खुसि थिएउ। मैले तिम्रो पुति चाटेको त्यो पहिलो पटक थियो। सयद मैले तिम्रो लागि बाटो खोलिदियेको थिये। तेस्पछि का दिनहरुमा मैले भन्दा तिमिले मेरो लांडो चुसेको मलाइ याद छ। मैले तिमिलाइ सधै भन्छु ,तिमिले जसरि चुस्छौ त्यो स्वर्गिय आनन्द अरु कोइ बाट पाएको छैन। अतुलनिय,अविस्मरणिय,तारिफ योग्य छ तिम्रो त्यो कला।कस्तो मजाले लिङ लाइ उत्तेजित पर्थेउ तिमिले।कस्तो मजाले मुखमा राखेर ललिपोप खाए झैं खान्थेउ अनि कति माया गरेर तिमि मेरो लांडो लाइ मुखमा राखेर तल माथि गर्थेउ। मैले कैले तिम्रो इच्छ सोदिन।आज लग्छ सयद तिमिलाइ मुखमा झरेको बिर्य मन पर्थ्यो कि तर मैले कैले तिम्रो मुखमा झारिन। हुनत मैले तिमिलै मन पर्दैन होला सोचेर मुखमा झारिन तर ऐले सम्झन्छु,तिमिले तेस्लाइ कति स्वाद लिन्थेउ होला।कति मजाले मेरो लांडो लाइ जिब्रोले सफा गर्थेउ होला। तेस्को लागि सरि मेरि माया।
मलाइ सम्झना छ हामिले कम्तिमा पनि पांच पटक चिकाचिकि खेलेका थिएम त्यो दिन। मन अझै अघाएको थिएन। ३:३० भयो बाबु स्कुल बाट आयो तिमि गएउ। धेरै दिन हम्रो दैनिकि भयो त्यो। म अफिस बाट आएको थाहा पाउने बितिकै तिमि आइपुग्थेउ। हामि माया गर्थेउ। र समय मिल्दा सुरु गरिहल्थेम। बिहान म उठ्न अल्छि थिएं तिमि आउथेउ मलै उठाउथेउ, हामि माया गर्थेम्। मलाइ सम्झन छ एकदिन तिमि र म बिहान मेरो बेडमा बसेर माया गरिरहेका थिएम बाबु अकस्मात आइपुग्यो। मैले तिमिलाइ लुकाए जस्तो गरें र सिरक ले छोपिदिए अनि उसलाइ तिम्रो मामु हुनुहुन्न भने। यसरि हामिले उसलाइ झुक्क्याएउ। एकदिन तिमि बाबु सङ बिहानै आएउ। मैले कम्पुटर खोलिदिये उ कम्पुटर चलाउन लाग्यो। म बेडमै पल्टिरहेको थिएं, हामि गफ गर्दै थियेम्।तिमिले मेरो खुट्टा चलाइदिदै थिएउ। बिस्तारै आफ्नो हाथ् मेरो घुंडा मा ल्याएउ। अनि बिस्तारै झन् झन् माथि गर्दै मेरो लांडो सम्म हाथ पुर्यएउ।तिम्रो सुकोमल हतको स्पर्षले त्यो बेला सम्म मेरो लिंग लांडो भैसकेको थियो। तिमिले बिस्तारै तेस्लाइ हल्लाउन थलेउ। अनि माथि तल माथि तल गर्न थालेउ। मेरो सानो भाइ अब ठुल्दाइ भैसकेको थियो। मेरो लांडो ठन्केर हुनसक्ने जति थुलो भैसकेको थियो। तिमिले चल्द चल्दै ठन्काएर ठुलो पारेर मेरो लांडोको रस झारिदिएउ। बास्तवमा यौनमा त तिमि हरेक हिसाबले परफेक्ट छौ। तिमिले गर्ने किस आहा कति मिथो हुन्छ ,लाग्छ सन्सार बिर्सिन्छु म।म कामामा जाने बेला म हम्रो टंग किस कस्तो मजाको हुन्थ्यो।एक्छ्हिन लाइ सारा कुरा बिर्सेर हामि एक अर्का मा लिन हुनेगर्थेउ। हाम्रो किस नै एस्तो हुन्थ्यो कि तिमि पनि भिज्थेउ मेरो … पनि ठन्किन्थ्यो। मलाइ अझै याद छ तिमिले दिएको लव बाइट कति दिन सम्म मेरो घांटिमा थियो । म काममा जन लाग्दा हामि किस्स् मा डुबेका थिएउ। तिमिले कुन बेला मलाइ त्यो बाइट दिएउ थाहा नै भएन।मलाइ काममा सबैले जिस्काउथे जब सम्म त्यो लवबाइट मेरो घंटिमा थियो। मैले पनि तिम्रो बुबुमा त ढेरै लव बाइट बनए टर घांटिको मजै अर्को हुने रैछ। अब को भेट म तिम्रो घांटिमा ल? हाम्रो मयप्रेम लाइ न रात ले न दिनले नै छेकेको थियो। कैले हामि हम्रो चिक चिकि बिहन ५ बजे नै सुरु गर्थेउ कैले मधय्रात् त कहिले मध्य देउसो। एक्चोति तिमि बिहानै मेरो मा आएको थिएउ। सयद बिहन को ४:३० ,५ बजेको हुदोहो। हमि दुबै बिहानको ताज पनका साथ यौन सुखलिने सोचमा थिएउ। तेइ मन बनाएर हामि भेटेका थिएउ। तिमि आउने भएपछि मैले पहिले नै ढोक खोलेर रखेको थियें। तिमि पायल को चमचम बजाउदै आएउ। म पल्टि राखेको थिए। तिमि अएपछि म पनि उथें। मैले तिमिलाइ सदा झैं स्वगत गरें। मिथो अनि तातो टंग किसले। हामि फोनमा गफ गरेर पहिले नै अलि अलि तातिसकेक थिएम। किसले हामिलै झनै ततायो। तिमि प्रय तिमिले लगाउने पातलो नाइट सुटमा थिएउ। खासमा तिम्रो नाइत सुट एति पाटलो थियो कि लुगा बाहिर बाटै तिम्रो शरिर को सबै अंगको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो।सधै झै हामि किस गर्दा गर्दै बेडमा पुगेउ।मैले तिमिलाइ किस गर्न छोडिन तिमिले पनि चूडिनौ। मैले तिमिलै बेड मा पल्टये।सधै किस पछि को मेरो पहिलो काम तिम्रो ब्रा को पिन खोल्ने हुन्थ्यो। मैले बिस्तारै आफ्नो हाथलाइ तिम्रो पचाडि पुरये।। लुग बहिर बातै मैले तिम्रो ब्रा को स्ट्राइप समाते र खोले। बिस्तारै मैले तिम्रो ब्रा लाइ एक हथ बाट निकाले अनि फेरि अर्को बाट। अनि मैले फुत्त ताने। अब तिमि ब्रा नलगाकि भैसकेकि थिएउ। मैले एकछिन तिम्रो बुबुलाइ बाहिर बाटै माडे तिमि झन् झन् इमोसनमा आइरहेकि थिएउ।।मैले ढिला नगरिकन तिम्रो नाइट सुट बिस्तारै माथि सरे। तिमिले हरियो रङ को कट्टु लगाएकि थिएउ। मैले तिम्रो नाइट सुटलाइ तिम्रो बुबु भन्द माथि सरे अनि बिस्तरै बुबु माद्डै तिम्रो निपल लाइ जिब्रो ले चलाउन थलें।तिमि झन् झन् तातिएको थिएउ। मैले बुबु चाट्दै,चुस्दै तिम्रो हरियो कत्तु खोले।अब तिम्रो नाइट सुट तिम्रो शरिरमा त थियो तर शरिर छोपेको थिएन।
तिमि सिरक बाहिर आउन मान्दिनौ सधै जस्तो मानिनौ। तिमिले आफ्नो लुगा लाइ सजिलो पारेउ र मेरो लिंग लाइ एक्चोटि दाया बाट अर्को चोटि बाया बटा जिब्रो ले चलाएउ अनि चाटेउ।मेरो लिंग सधै झैं अब लांडो भैहाल्यो। मैले पनि समय बर्बाद नगरेर तिमिलाइ खाटको एकछेउमा लगे।तिम्रो खुट्टा अलिकता फट्टाएं र आफ्नो लांडो लाइ तिम्रो पुति मा हाले। मेरो दुबै हात तिम्रो बुबु मा थियो,मेरो मुख तिम्रो मुख मा मेरो लांडो तिम्रो पुतिमा।तिम्रो पुति बिझेर पानिपानि भएको थियो। म लांडो लाइ जति जति तलमाथि गर्थे तिम्रो त्यो पुतिको पानिले आवाज निकाल्थ्यो।प्याच् प्याच्।बिर्सिनै नसक्ने आनन्द आएको थियो त्यो दिन। मैले एकछिन् पछि झारे।
हामि थाकेर सुतेउ। तर बाबु उठेछ। तिमिलाइ नदेखेर मामाघर् फोन गरेछ। पछि तिमिले आफ्नो ममिलाइ लाइ मोर्निंवकमा गएको र घर बहिर ब्याडमिन्टोन खेलिरहेको भनेर ढाट्नु परेको थियो। त्यो झूटको पनि बेग्लै मजा थियो। हामि पछि भेटेर हास्थेउ। हुनपनि तिमिलाइ देख्ने बितिक्कै म ततिन्छु,भेट्ने बितिकै मेरो ठन्किन्छ। मलाइ थाहा छ तिमिलाइ पनि तेस्तै हुन्छ। मैले अनुभव गरेको छु तिमि कति चांडो भिज्थेउ मैले तिमिलाइ छुनेबितिकाइ भनेर। तिमि पनि मलाइ भेट्न कुनै न कुनै निउ पारेर आउथेउ।
मलाइ सम्झना छ हाम्रो बिचमा खुलेर तेस्तो कुनै सम्बन्ध बनिसकेको थिएन। दुबै मा यौनको आगो त सल्केको थियो तर एक् अर्का लाइ भनिसकेको थिएन। एक्दिन तिमि मलाइ पैसा दिन आएउ। म सिरकमा बसेर किताब पढिरहेको थिए। मेरो एउटा हथ मेरो लांडो मा थियो। म तेतिकाइ लांडो चलाएर पढिरहेको थिए।तिमि आएको थाहा भएन।अकस्मात् तिमिलाइ देखे मेरो हाथ लांडो माइ थियो। तिमिले त्यो देखेउ सायद तिम्रो मुख बाट राम राम निस्कियो। मलाइ लाग्यो मैले जानेर त देखाएको हैन तर तिमिले देखेउ।ठिकै भो।
तिमिलाइ थाहा छ हाम्रो भर्खर भरखर यौनखेल सुरुभएको थियो। हामि एकजना को कुरा छिन्ने मा संगै थिएउ।त्यो दिन मलाइ तिमि मेरो आफ्नै बुढि अनुभव भैरहेको थियो। म दिन बिराएर जस्तो तिमि कहा पुग्थे। हाम्रो चिकिखेल हुन्थ्यो। तिमि बिझ्थेउ म झर्थे। दुबै थाक्थेउ अनि म फर्किन्थे। हो तेइ बेला थियो तो इंगेजमेण्ट। तिमिपनि यौनको भोक ले रन्थनिएर बसेको बर्षौ पछि लांडो को असलि मजालिन पाइरहेकि थिएउ।दैनिक नभए दिन बिराएर हामि लांडो पुति जोडि हाल्थेउ। तेहि भएर पनि होला तिमि खुसि देखिन्थेउ। भर्भरौदि देखिन्थेउ। तिमि राम्री त सधै थिएउ तर हाम्रो लगातार को सम्भोगले तिमिमा एउटा चमक ल्याएको थियो।
मलाइ थहा छैन ऐले त्यो तिमि स्विकार गर्छौ कि गर्दिनौ तर यो सत्य हो। सम्झ त हामि एअक् अर्का मा कति लिन हुन्थेउ। तिमिलाइ नछुनि भाको बेलामा अरु बेला भन्दा बडि यौन चाहना हुन्थ्यो। तिमि मलाइ गर्न मन छ त भन्दिनथिएउ तर म बुझ्थे। एकदिन हामि तेसरि नै राति सङै तिम्रो मा राति सुतिरहेका थिएउ। तिमिले गर्न मन छ भने गरुम भनेउ।मैले कण्डम लगाए। मैले चिकेर मजा लिए तिमिले चिकाएर मजा लिएउ। पछि हेर्दा कन्डम पुरै रगत ले लत्पत थियो। तिमिले पछि पछि भन्थेउ मेरो लांडो तिम्रो बुडाको भन्दा सानो पनि छ कडा पनि छैन। सयद तिमिलाइ कडा लांडो तिम्रो पुतिमा छिर्दा जति को मजा औदैन थियो होला। तर म तिम्रो लागि नहुनु भन्द के भन्ने उखान जस्तै भएको थिए होला। सुरु सुरुमा त मेरो लांडो ले तिम्रो पुतिलाइ भरपुर आनन्द दिएको थियो ।यो म ठोकेर भन्न सक्छु।
ऐले लेख्दा लेख्दै सम्झिए तिम्रो पुति र रौं।कति थोरै छ है तिम्रो पुति ओरि पोरि को रौं हरु। हामि त्यो पनि कुरा गर्थेउ।सम्झ त हामि कति नजिक भैसकेक थिएउ र कति चिकाचिक गर्थेउ। एक्चोटि म पोखरा गएको बेला तिमि नछुनि भैन भनेर रगत जचाउन पनि गएचौ। आतिएर मलाइ फोन गरेछौ।फोन लगेन छ। म आउद तिमि नछुनि भैसकेको थियो।पछि मलाइ त्यो रगत जांचको रिपोर्ट देखाउन खोज्दै थिएउ।सधै हाम्रो संभोगपछि तिमि एउटा प्रश्न सोध्थ्यौ। म गर्ववति भए भने? मैले पहिले त कुरा टार्न खोज्थे पछि पछि मैले तिमि संग बिहा गर्छु पनि भनेको थिएं। तिमि भन्थेउ त्यो अर्कि राइ केटि बाबु लाइ नयां ड्यड्डि खोजिदिउ भनेर जिस्काउथि। सयाद तेस्लाइ पनि चिलाउथ्यो होला तर बिचरिको भाग्यमा मेरो लांडो कहा पाउनु। सबै को भाग्यमा खोजेको कुरा कहा पाइन्छ र। आज तिमिलाइ भन्छु उस्लाइ मैले दाना हाल्छु कि भनेर कत्ति गर्थि। केहि न केहि निहु पारेर ।तर मैले तेस्लाइ कैले भाउ दिन। त्यसमा तिमिमा भाको यौन चाहना बढाउने केहि पनि थिएन। न बुबु न शरिर। तिमि त मेरि वियाग्रा हौ,तिमि मेरि यार्सागुम्बा हौ।
तेस्लाइ थाहा भयो होला हाम्रो प्रेम कहानि। हाम्रो चिकाचिक को प्याच् प्याच आवज त सुनिन होला तर खाटको चुइ चुइ पक्कै सुनिहोला। तिमि मेरो मा र म तिम्रोमा गाको थाहा पाइ होला । हुन पनि कसरि भाउ दिनु। न जिउ न डाल। प्वाल मात्रै त कति पैन्छ तर माया समेत दिने प्वाल धेरै कम पाइन्छ जुन मैले तिमि बाट पाएको थिए। ऐले त तेस्को पनि प्वाल भर्ने कुनै लाहुरे आयो होला। तेसलाइ शुभकामना। मेरो नपाए पनि अरु को पायोस्। म त तिम्रै मा दंग छु।
तिमिलाइ एउटा सत्य अर्को पनि खोलिदिउ। तिमि संग भेट हुन छाडेपछि मैले एकजना अर्को यौनसाथि भेटे। उ सम्भोग कि भोकि हैन।सम्भोगको सुख कि भोकि।लोग्ने ले सम्भोग त गर्थ्यो रे तर एउटी बेश्यालाइ गर्ने ब्यहवार गरेर। हरेक रात जांडमा डुबेर घर आउने र श्रीमतिलाइ बेश्यालाइ जस्तो ब्यवहार गर्ने। त्यो भन्दा पनि बढि उ बहिर केटि खेलाउन्थ्यो।जुन दिन देखि उस्ले उ बाहिर बेश्याहरुसंग पनि सुत्छ भन्ने थाहा पाइ उस्लाइ लोग्ने संग संभोग गर्नै मन लाग्न छोड्यो रे। उस्मा उत्साह नै हुदैन थियो रे लोग्ने संग संभोग गर्दा अनि आफु हरेक रात बलात्कृत भैरहेको अनुभव हुन्थ्यो रे।मलाइ थाहा छैन उस्ले आफ्नो पिडा साट्न किन मलाइ रोजि।तर मैले धैर्यता पुर्वका उस्को कुरा सुन्दिन्थे। तिमि उमेरमा म भन्दा अलिकता जेठि छौ तर हामि साथि जस्तै छौं। उ उमेरमा म भन्दा कान्छी छे। तर राम्री छे। उमेर ले गर्दा होला हाम्रो यौनकृडा त हुन्थ्यो तर अरु गफ खासै मिल्दैनथियो,फेरि उमेर ले होला उस्मा यौन सुख दिन सक्ने त्यति क्षमता पनि थिएन। उ कोसिस त गर्थि तर म भित्र बाट सन्तुष्ट हुदिनथिए।मैले सुरुमा पनि भने हाम्रो सम्बन्ध बन्न बर्षौ लाग्यो।तिम्रो बुढा संगको प्रेम फस्टाउन त्यति लागेको थिएन होला।कति बर्षको भेटघाट पछि तिमिहरु बिच प्रेम भएको हो? मलाइ लाग्छ बर्ष दिन भन्दा बडि गएन होला। तर हामि शारिरक रुपले नजिक् हुन कम्तिमा पनि ३ बर्ष लाग्यो होला। तेसैले हामिले एक अर्का लाइ बुझेका थिएउ। हाम्रो संभोगमा प्रेम मिसिएको थियो।त्यहि भएर त म तिम्रो यौनांग चाट्न घिन मान्दिनथिए तिमि मेरो लिंग चुस्न खुसि हुन्थेउ। तर ति केटिसंग मेरोतेस्तो लामो संबन्ध पनि हैन।सानो संगत, न भावनाको सम्बन्ध।केवल बासनाको भोक मेटाउने कुरा थियो त्यो। उ मलाइ खुसि बनाउने पुरा प्रयत्न गर्थि तर भित्रबाट म खुसि भैन।हो उ तिमि भन्दा बडि फुर्तिलि थि यौनमा।म भन्दा बडि यौनासन उस्लाइ आउंथ्यो।हरेक पटक नया आसनको आइडिया भन्थि।मैले उबाट धेरै आसन सिखे। मेरो उ संग संगत भएको धेरै दिन भएको पनि थिएन। कुरै कुरामा आफ्नो बुढाको कुरा झिकि एक्छिन पछि आफ्नो प्रेम बिबाह भएको तर मलाइ प्रेम बिवाह कैले नगर्नु भन्ने सल्लाह दि। मैले किन र आफु गर्ने मलाइ नगर्नु भन्ने भने।उस्ले त्यसैले त भनेको भनि र बिस्तारै उस्ले आफ्नो राम कहानि खोल्दै गै।मैले सम्झाउने कोसिस गरे। उ मेरो छातिमा टाउको राखेर रुन थालि। म क् गर्ने भएं।मैले नरोउ भन्दै उस्को ढाड मुसारें। उस्को टौको मेरो छातिमा र दाहिने हात मेरो छातिको दुधमा थियो।उस्ले अन्जानमा आफ्नो हात् चलाउदा उस्को औलाले मेरो दुध टिसर्ट बाहिर बाट चोइन्थ्यो। त्यो बेलासम्म ममा कुनै यौनको भावन आइसकेको थिएन।तर उ एक्छिन मेरो छातिमा अडिएर बसेपछि र मैले ढाड मा चलाइदिरहेपछि अनायासै मेरो लिंग बिस्तारै ठुलो हुदै जान थाल्यो।मेरो शरिर तातिदै गयो।मेरो हात हरु नचाहेरै काप्न थाले।मेरो उत्तेजित लिंग अनायस उस्को कुहिनो मा ठोकिन पुगेछ। उस्ले मलाइ पुलुक्क हेरि।मलाइ अफ्ट्यारो लाग्यो।उस्ले मेरो लिंग कुहिनोले ठोकिने गरिनै फेरि राखि।मेरो लिंग उत्तेजित हुंदा उस्को कुहिनो ठेल्न खोज्थ्यो।जति पटक तेस्तो हुन्थ्यो उ मलाइ तेति पटक हेर्थि। हास्दै मेरो अनुहार हेर्थि।मेरो हात हरु नचाहेरै काप्न थाले।मेरो उत्तेजित लिंग अनायस उस्को कुहिनो मा ठोकिन पुगेछ। उस्ले मलाइ पुलुक्क हेरि।मलाइ अफ्ट्यारो लाग्यो।उस्ले मेरो लिंग कुहिनोले ठोकिने गरिनै फेरि राखि।मेरो लिंग उत्तेजित हुंदा उस्को कुहिनो ठेल्न खोज्थ्यो।जति पटक तेस्तो हुन्थ्यो उ मलाइ तेति पटक हेर्थि। हास्दै मेरो अनुहार हेर्थि। बिस्तारै उस्ले आफ्नो कुहिनो सारि र छातिमा भाको आफ्नो हात मेरो लिंगमा लगि। मेरो लिंगको प्रेसर बड्दै थियो।मैले उस्को आंखाको आशु हातले पुछिदिएं।र फेरि आफ्नो हात उस्को ढाडमा चलाइरहे।मेरो हात हरेक पटक ढाडमा उस्को ब्रामा गएर ठोकिन्थ्यो। अनायासै उस्ले अपत्यारिलो गरि मेरो लिंगलाइ मज्जाले समाति।म एक्छिन अवाक् भएं। के गरेको जस्तो लाग्यो। पछि उस्ले मलाइ भन्थि मेरो होसै भएन कुन बेल मैले किन र कसरि लिंग समाते।उस्ले मेरो लिंग समातेपछि मैलेपनि उस्लाइ माया गरे। टंग किस दिए।उस्ले हत्त न पत्त मेरो लिङ मेरो पाइन्टबाट निकालि र चुस्न थालि।मैले मेरो पाइण्ट खोले उस्लाइ सजिलो बनाइदिए।एकछिनमा हामि संभोगको लागि तयार भएउं। यसरि उ संगमेरो पहिलो संभोग भयो। त्यो म न बिदेशिएसम्म जारि थियो। मैले उस्लाइ सजिलै पाएको थिए। मैले चाहेको बेला उ तयार हुन्थि तर मैले तिमिलाइ त्यहा हुदा पनि बिर्सिन सकिन ऐले पनि बिर्सिएको छैन।अर्को कुरा पनि भन्दिन्छु। त्यो केटिलाइ तिमिले राम्रोसंग चिन्छौ।र म बिदेशिएपचि मेरो उ संग कुनै सम्पर्क छैन।
साचि हामिले चाक् चैं कैले ट्राइ गरेनौ है। सरि तिम्रो चाक त चाखेको छु। चाकको प्वाल छैन। त्यो बांकि छ है।
चट्ट पैले चाक धुनु अनि म पैले तेल लगाउला बिस्तारै तेल लगाएको औंला प्वालमा छिरांन्ला अनि बिस्तारै प्वाल खोलेर अरु पनि छिराउंला।ऐले भन्नु भन्दा गर्नु बेस हैन कि कसो? चक चिक्ने त सुनेकै छौ नि। म संग नगरे पनि बुढा सङ त पक्कै गरेकै छ होला। तर चिन्ता नगर नगरेको भए हामि गरुम्ला। मेरो तिम्रो बुढा को जस्तो कडा नभए पनि ठुलो नभए पनि तिमिलाइ संतुष्ट बनाउन सक्ने छ। अब त म पनि पैले भन्दा अनुभवि भाको छु । तिम्रो नझारे सम्म आफ्नो झर्दिन। पिर नगर…।।
सम्झ त म राति कसरि सबैलाइ छलेर ढोका लगाएर तिम्रो मा पुग्थें। अन्ध्यारोमा पनि म तिम्रो शरिरको सबै अंग पत्ता लगाउन सक्थें। तिमिलाइ थाहा छ मैले पहिलो पटक तिमिलाइ कुर्ता बिना ब्रा मा कहिले देखेको? तिम्रो कसैलै माओबादिले अपहरण गरेको थियो। तिमिराति त्यहिं बसेर बिहान आएको थिएउ। रातभरि नसुतेर होला बिहान तिमि लुगा फेर्दै थिएउ। तिमिले सुत्न भनेर लगाएको तिम्रो मन पर्ने कालो कुर्ता फुकलेउ। अनि तिमि फेर्ने लुगा खोज्न थालेउ। तिमिले सेतो रंगको ब्रा लगाएकि थिएउ।म हेरिरहे।धेरै बेर पछि तिमिले माथिबाट नाइट सुट लगाएउ। मैले पहिलोपटक तिम्रो बुबुको गोलकार भितृ लुगा मा मात्रै देखेको त्यो पहिलोपटक थियो। सायद तिमिलाइ पनि थाहा थियो मैले हेरिराको छु भनेर।
तिमि संग मलाइ धेरै कुरा गर्न मन छ। एउटा त लिंग चुसाउने।त्यो त तिमिलाइ भन्नै पर्दैन।तिमिले जति आनन्द त मलाइ अरु कोहिले दिनै सक्दैन। अर्को एकदिन तिमि र म २४ घण्टा सङै बस्ने। अनि कति पटक जादो रैछ हेर्ने।त्यो दिन २४ घण्टा केहि लुगा पनि नलागाउने। नांगै बस्ने। म मेरो लांडो हल्लाउदै हिड्छु तिमि बुबु हल्लौदै हिड। मन लाग्ने बितिकै चिकाइ हाल्ने दन्काइ हाल्ने। एकदिन म तिम्रो मा आउला। सुरुमा भेट हुने बितिकाइ भन्नै पर्दैन। मेरो लांडो ठनक्क भैहाल्छ। तिम्रो पुति भिज्न थालिहल्छ। म तिमि मलाइ वेलकम गर्न ढोका मा आउदा तिमिलाइ ढोका मा नै किस खान थाल्छु। टिमिले मलाइ साथ दिन्छौ। तिम्रो खुट्ट फट्टाएर म तिमिलाइ बोक्छु र किस्स गर्दै म तिमिलाइ बेडरुममा लान्छु। हाम्रो किस चलिरहन्छ। म तिम्रो बुबु चलाउन लाग्छु।
बिस्तारै तिम्रो लुगा खोल्छु। तिमि मेरो लुगा खोल्छौ। हामि नांगै हुन्छौ। म किस गर्दै तिम्रो बुबु चुस्न थाल्छु। कहिले तिमि मेरो छाति चुस्छौ कहिले म तिम्रो बुबु चुस्छु।। हामि सहन नसक्ने हुन्छौ। तिम्रो पुति पुरै भिज्छ मेरो लांडो सम्हाल्नै नसक्ने गरि ठन्किन्छ। म तिम्रो पुति लाइ औंलाले कुचुकुचु गर्दिन्छु। बिस्तारै औंला पुति भित्र छिराएर पुतिको माथि पट्टि चोर औंला ले चलाइ दिन्छु र बाहिर छाला लाइ रगड्न थाल्छु। तिमि अति भएपछि आफै मेरो लांडोलाइ पुतिमा छिराउन हतार गर्छौ।म बिस्तारै लांडो लाइ छिराउंछु। तिमि मलाइ चांडो चांडो गर्न भन्छौ। म चांडो चांडो लांडोलाइ माथि तल गर्छु। तिम्रो झर्न लाग्छ मैले त्यो थाहा पाएर म पनि झन् चांडो गर्छु। तिम्रो पनि झर्छ मेरो पनि। हामि एकछिन संगै पल्टिन्छौ।
उठेर हामि नुहाउन जान्छौ। मैले तिमिलाइ तिमिले मलाइ नुहाइदिन्छौ। नुहाउदा नुहौदै तिमिले सावरको पानिमाइ मेरो …… चुस्न थाल्छौ।तिमिले चुस्दा चुस्द्दै तिम्रो मुखमा नै मेरो फुसि झर्छ। तिमि तातिएकै हुन्छौ। तिमिले मेरो लांडो लाइ झरेपनि चुस्न छोड्दैनौ,मेरो लांडो फेरि ठुलो हुन्छ।मैले तिम्रो पुति चाट्छु। मुखले रगड्छु। तिम्रो बुबु चुस्छु। औन्लाले तिम्रो बुबु चलाउन्छु। अनि तिमिलाइ जुरुक्क बोकेर उभेर नै हामि दे दना दन गर्छौ। हामि दुबै को फेरि झर्छ। हामि बेडमा सुत्छौ। उठेर हामि खाना खान्छौ। अनि हामि अश्लिल चलचित्र हेर्न थाल्छौ। एकपटक हामि डबल हेर्छौ र चिकचिकि खेल्छौ।अर्को चोटि ट्रीपल हेरेर चिकचिक गर्छौ। अनि हामि निदाएर उठेपछि हाम्रो तेल लगाउने कार्यक्रम हुन्छ। म तिमिलाइ तेल लगाइदिन्छु। बुढि आउंला बाट सुरु हुन्छ। बुबु लाइ र तिघ्र को बिचमा माया गर्दै तेल लगैदिन्छु। तिम्रो फेरि भिज्न थाल्छ। मेरो त सदाबहार नै भयो फेरि चिकाचिक। अब तिम्रो तेल लगाउने पालो। तिमि पनि प्रेमले मेरो सबै तिर तेल लगाइदिन्छौ। बिशेस गरि लिंगमा। मेरो लिंग ठुलो भएपछि अझ ठुलो बनाउन तिमि फेरि तेस्लै लोल्लिपोप जस्तै गरेर चुस्छौ। म पनि भरपुर आनन्द लिएर चुसाउंछु। अनि फेरि हाम्रो ट्याक्ट्यक। अब मेरो पालो हुन्छ तिम्रो चाट्ने म पनि तिमिलाइ भरपुर आनन्द दिने गरि चाट्छु ।अनि फेरि ट्याक्ट्यक।
यसरि हाम्रो दिनभरि खाने र गर्ने चलिरहन्छ। कैले टेबल मा कैले बेड मा कहिले बाथरुममा।कहिले चिया खाएर,कहिले खाना खाएर कैले रक्सि खाएर।कहिले कुकुर को जस्तो,कैले बात्सायनको बिभिन्न आसनमा।तेस्को लागि मैले र तिमिले भेट्नु पर्च। त्यो दिन छिट्टै आउंछ। अब को हाम्रो चिकचिकिमा तिम्रो भिज्न नछोडे सम्म मेरो झर्न नछोडे सम्म हाम्रो चोदाइ को काम भैरहन्छ।
तिमिले मलाइ कति माय गर्थेउ।अलिकता केहि पाक्दा पनि लिएर आउंथेउ। दशैंमा तास खेल्न साथि नपुग्दा म र तिमि भएर खेल्थेउ। तिम्रो मम्मि पनि एकचोटि हामि संग खेलेको याद छ। मैले भन्न खोजेको हामि किस मात्रै खादैनथिएम खान पनि संगै खन्थेम। हामि चिकिखेल मात्रै खेल्दैन थिएम तास को खेल पनि संगै खेल्थेम। त्यो भन्दा बडि तिम्रो बुढा आएर तिमि गर्भवति भएको र तेस्पछि को सबै घटना हरु तिमिलाइ,तिम्रो बुडा लाइ,तिम्रो मामु लाइ अनि मलाइ थाहा होला। त्यसपछि हाम्रो चिकचिक मा मैले तिम्रो बुबु चुस्दा कस्तो दुध आउन्थ्यो है? सम्झेको छ त्यो? तातो दुध् हुन्थ्यो त्यो।
तिम्रो बुढा आएपछि त तिमिले मलाइ कहिले चिक्नै दिएनौ है। बुढा गएपचि पनि कति दिन हामिले गरेनौ।तर त्यो नगरेको तिमिलाइ मन नलागेर हैन तेस्को पछाडि कारण थियो।त्यो मलाइ पनि थाहा छ तिमिलाइ पनि। पछि फेरि हाम्रो मस्ति सुरु भयो। तिमि मैले तिमि संग भेटे पचि जब माय गर्न थाल्थे अनि तिमि भन्थेउ यस्तो चाहिने ले बिहा गर्नु नि। ऐले पनि म तिम्रो लागि तेस्तै छु। तिम्रो यौन उत्तेजित गराउने क्षमता ले एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ। बिहा गर्ने र नगर्ने संग केहि मतलब छैन। तिमि सधै तताउन सक्ने छौ।हुनत तिमिले मलाइ बिहा गराउन केटि पनि खोजेको हो। मैले पनि तिमिले खोजेको जस्तो केटि पनि मलाइ स्विकार छ भनेर ट्यक्ट्यक गर्दा गर्दै भनेको थिएं।
तिमिले खोजेको जस्तो केटि संग पनि म बिहा गर्न तयार छु। अर्को कुर पुति टाइट त लुजको कुरामा तिमि भन्थेउ। बिहा पछि थाहा हुन्छ। बच्चा नभाको को छिराउन कति गहारो हुन्छ। हुन पनि तिमिले मेरो लांडो हातै ले हल्लाएर पनि झार्देको छौ, चुसेर पनि झार्देको छौ, पुति भित्र छिराएर पनि झार्देको छौ।मेरो लुगा धुने आइमाइले एक्लो लोग्ने मान्छेको बेड,तर तन्ना भरि रगत र दागै दाग हुन्छ भनेर तिमि संग भन्थि हैन? हुनपनि हामिले यौनसुख लिएको दोस्रो दिन मैले तिम्रो यौनांगभित्र हात राखेर चलाउंदा त्यहांबाट रगत आएको मैले अझै सम्झेको छु। फेरि कण्डम नलगाएर सम्भोग गर्दा मेरो झर्ने बेलामा म मेरो लिंग बहिर निकाल्थे।अनि त तन्नामा दाग रगतको टाटो हुने नै भयो। जीवन को एउटा मोडमा यति धेरै माया र यौन सुख दिने तिमिलाइ म कहिलै भुल्न सक्दिन। मेरो जीवन मा केहि समयको लागि भए पनि बिर्सिन नसक्ने यौन सुख दिने तिमिलाइ मेरो सधै माया अनि प्रेम छ।
Labels: Sex, मलाइ सबै भन्दा बढि यौन सुख दिने साथि लाइपत्र